ကမ္တာ့ဘဏ်ိံငြ့် ဖြံႛ္ဘဖြိးတိုးတက်မမြဵား အတငြ်း အမဵြိးသမီးမဵား အခငြ့်အရေး
Mon May 20, 2013 18:34:27
ကမ္တာ့ဘဏ်ိံငြ့် ဖြံႛ္ဘဖြိးတိုးတက်မမြဵား အတငြ်း အမဵြိးသမီးမဵား အခငြ့်အရေး ISSUE AREAS: Development
KEYWORDS: လိင်ကြဲူပားမအြေူခခံသောအူမင်၊ ကမ္တာ့ဘဏ် URL: http: //www.awid.org/publications/primer...
DESCRIPTION: ယခု စာစောင်တငြ် ကမ္တာ့ဘဏ်ိံငြ့် ထိုအဖြဲႛ၏ ဖြဲႛစည်းပုံမဵား လိင်ကြဲူပားမဆြိုင်ရာ ဗဵဟြာသစ်မဵားကို ဖော်ူပထားသည်။ လိင်ခြဲူခားမအြတကြ် လြံႛဆော်နေသောသူမဵား အတကြ် လုပ်ဆောင်သင့်သော အခဵြိႛလုပ်ငန်းမဵားကို အဋ္ဌကံပေးထားသည်။ RELATED RESOURCE: Association for Women’s Rights in Development, www.awid.org.
ORGANIZATION: Association for Women’s Rights in Development, www.awid.org. LOCATION: ကနေဒၝ၊ တောင်အဖရိက၊ မက္ကစီကို စီးတီး
ယခုအဖြဲႛသည် ကဵားမတန်းတူရေး၊ တည်တံ့ခိုင်္ဘမဲသော ဖြံႛ္ဘဖြိးတိုးတက်မြိံငြ့် အမဵြိးသမီးလူႛအခငြ့်အရေး ရရြိရေးအတကြ် လုပ်ဆောင်နေသော လူမဵာိးံငြ့် အဖြဲႛအစည်း မဵားကို ဆက်သယ်ြပေူးခင်း၊ သတင်းပေူးခင်ိးံငြ့် လုပ်ဆောင်ရန်တနြ်းအားပေး နေသေိာိုံင်ငံတကာ အဖြဲႛ၀င်မဵားပၝသည့်အဖြဲႛူဖစ်သည်။
Date: 21 Dec 2006, 06:53 Related Resource
ကုလသမဂ္ဂ ထောင်စိုံစြ် ဖြံႚ္ဘဖြိးတိုးတက်ရေး မ္တွော်မနြ်းခဵက်မဵား
ကမႝာက ပိုမိုကားသင့်သော ဇာတ်လမ်း ၁၀ ပုဒ် ကုလသမဂ္ဂ လုပ်ငန်း ကုလသမဂ္ဂိံငြ့် ဒေသဆိုင်ရာ အဖြဲႚအစည်းမဵား ပူးပေၝင်း ဆောင်ရကြ်ူခင်း ပဋိပက္ခလနြ်ိုံင်ငံမဵားတငြ်ူငိမ်းခဵမ်းရေး မဵြိးစေ့ ခဵပေးရာတငြ် ကူညီူခင်း၊ ကုလသမဂ္ဂူငိမ်းခဵမ်းရေး တည်ဆောက်ရေး ပံ့ပိုးရေးဌာန၏ လုပ်ဆောင်ခဵက် လည်ပတ်နေသော ကုလသမဂ္ဂ ယိံ္ဇယား ကုလသမဂ္ဂ ယိံ္ဇယား အထောက်အထား စာရက်ြမဵား လေ့လာ သင်ုကာူးခင်ိးံငြ့် မီဒီယာ ရင်ူးမစ်မဵား လူႚ အခငြ့်အရေး။ ။ကုလသမဂ္ဂ လက်တဲဖြော် ကုလသမဂ္ဂိံငြ့် လူထုအေူခူပြ အဖြဲႚမဵား မဟာမိတ် ကုလသမဂ္ဂိုံင်ငံတကာ စာခဵပြ် ပေၝင်းခဵပြ် ကုလသမဂ္ဂ စာရကြ် စာတမ်းမဵား။ ။လူႚအခငြ့်အရေး သုတေသန လမ်းညနြ် Next